Hoos u dhaca Qiimaha Shilinka Somaliland oo sii socda & Rabitaanka Madaxweynaha Somaliland | Maalmahanews
Hoos u dhaca Qiimaha Shilinka Somaliland oo sii socda & Rabitaanka Madaxweynaha Somaliland
Madaxwaynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa markii u horeysay ka hadlay Qiimo dhaca Shilinka Somaliland, waxaanu sheegay inay doonayaan in Shilinka Somaliland noqdo ka keliya ee wax lagu kala iibsado.
Qiimaha Shilinka Somaliland, ayaa aad hoos ugu dhacay waxaana boqolka doollar ee Maraykanku uu marka lagu sarifo Shilinka Somaliland uu marayaa in ka badan 800.000 kun, laakiin, Madaxweynaha oo Shalay khudbad u jeediyay Baarlamaanka, ayaa sheegay in Xukuumaddiisu ku dedaalayso sidii boqolka Doollar loogu soo celin lahaa Sarifkiisa 600.000 kun oo Shilinka Somaliland ah.
Madaxwaynaha oo arrimahaa ka hadlaya, ayaa yidhi, “Dal kasta oo dunida ku yaal wuxuu leeyahay Calan iyo Cumlad u gaar ah. Lacagta Qarankani uu leeyahay waa Shillinka Somaliland. Waxaa hubaal ah in lacagteenii uu ku yimi qiimo dhac, ka dib markii ay suuqa iyo seyladda ganacsiga ku cidhiidhyeen lacago qalaad. Taasi waxay keentay in lacagteenii ay soo ururto isticmaalkeedu. Haddaba, si aynu uga badbaadno dhibaatooyin siyaasadeed, dhaqaale iyo lacagteena oo sii qiima beesha. Waxaa xukuumaddayda ka go’an in ay xaqiijiso arrimahan:-
1) Waxaannu suurto gelinaynaa in lacagta Shillinka Somaliland noqoto cumladda rasmiga ah ee wax lagu kala iibsado.
2) Waxa bartilmaameed inoo ah in qiimaha sarifka dollarka ee Shillinka Somaliland la gaadhsiiyo 6,000 oo Shillin.
7) Waxaannu dhiiri gelinaynaa in dalka ay yimaaddaan Maal-gashadayaal, Shirkado Ganacsi iyo Bangiyo Caalami ah, si dhaqaaleheenu u kobco.
9) Waxaan Shacbiga Somaliland u damaanad qaadayaa in aanay is dhex geli doonin hantida Qaranka keyd ka u ah ee Bangiga Dhexe ka mas’uulka yahay, iyo hantida ay xukuumadaydu isticmaasho. Arrintani waxay ka hortag iyo xal waara u tahay in aanay suuqyada hafin lacago dheeraad ku ah Shillinka Somaliland, taas oo aan dawladda dakhli ahaan u soo gelin ama aanay xoogsan.”
Qiimaha dhaca Shilinka Somaliland, ayaa waxa ka dhashay Sicir barar khatar galiyey Nolosha Danyarta Dalka, waxaanu Madaxwaynuhu u saaray Guddi Qaran oo soo baadha Sababaha keenay Sicir bararkaasi, inkasta oo aanu Madaxweynuhu Shalay ku soo darin khudbaddiisa wax natiijo ah oo ay Guddidaasi u soo gudbiyeen